Haddii Dalalka Yurub Shaqaalaha Laga Mamnuucay in ay Xijaabka Xidhaan, Ingiriiska Kama Shaqaynayo Xukunkaas | Togdheer News Network
Haddii Dalalka Yurub Shaqaalaha Laga Mamnuucay in ay Xijaabka Xidhaan, Ingiriiska Kama Shaqaynayo Xukunkaas
Go’aan lagu mamnuucay in dadka shaqaalaha ah ee dalalka qaaradda Yurub ay xidhaan xijaabka amma dharka asturan, ayaa la sheegay in aannu saamayn ku yeelanayn dalka Ingiriiska, go’aankaasna aannu ka shaqayn doonin.
Golaha Muslimiinta Ingiriiska ee MCB (Muslim Council of Britian), ayaa sheegay in ay ahayd maalin murugo u ah caddaaladda iyo sinnaanta, maadaama Garsoorayaal ay Salaasadii toddobaadkan soo saareen go’aan ay shaqaalaha Yurub kaga mamnuucayaan in ay u labbistaan habka diintoodu ogoshahay, taasina ay xad-gudub iyo takoor ku tahay xorriyadda diinta.
Maxkamadda Caddaaladda Yurub ee ECJ (European Court of Justice), ayaa soo saartay go’aan ay ku mamnuucday in si toos ah shaqaaluhu u xidhaan maryo ay ka muuqato mabda’ siyaasadeed, falsafadeed amma diimeed, taasina anay ahayn takoor.
Khubaro arrintan fallanqayn ku samaysay ayaa ka digtay in go’aankan aannu ahayn mid fulintiisu ay ka fududahay dalka Ingiriiska, shaqaaluhuna aanay Yurub la sharci noqon karin, maadaama Ingiriisku ka baxay Midawga Yurub.
Go’aankan muranka badan keenay ayaa dood ka dhaliyey Muslimiinta iyo habka ay bulshada u dhex geli karaan, taasoo tallaaban u muuqatay mid dagaal ku ah dharka asturan ee haweenka islaamka ah xidhaan ee sharci darrada ay ka dhigeen dalalka Yurub.
Garyaqaan Phil Pepper oo sharciga shaqaalaha ku takhasusay, iskaashina la leh shirkado kale oo badan, ayaa sheegay in go’aankan lagu mamnuucay dharka qaar in shaqaaluhu xidhaan aan lagu dabakhi karin dalka Ingiriiska.
“Waa go’aan xiiso leh oo ka soo baxay Maxkamadda Caddaaladda Yurub, laakiin taas macnaheedu maaha in ganacsiga Boqortooyada Ingiriiska ay awood u leedahay in ay mamnuucdo dhar diimeed goobaha shaqada in lagu yimaado, taasima maaha mid fudud, macnaheedunaha maaha dharka la mamnuucay, balse waa fulinta oo keenaysa carqalado,” ayuu yidhi Garyaqaan Phil Pepper.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka iyo Sinnaanta (Commons Women and Equalities Committee) Maria Miller, ayaa dawladda Ingiriiska ugu baaqday in go’aankan aan la qaadan karin, maadaama uu ciqaab ka dhigayo in haweenka Muslimka ah goobaha shaqada si caadiga ah uga hawlgalaan.
“Waxaan rajaynayaa in ay caddahay in waxa haweenku xidhanayaan ay tahay wax dookhooda ah, mana aha maxkamadda dookheeda hadday tahay Ingiriiska iyo Maxakamada Caddaaladda Yurub,” ayey Ms. Miller oo la hadashay barnaamijka BBC Radio 4’s World at One oo Jamhuuriya soo xigtay.
Aqoonyahannada Ingiriiska iyo siyaasiyiin badan ayaa sheegay in go’aankaas aan lagu dabakhi karin Boqortooyada Ingiriiska shaqaalaheeda, maadaama Ingiriisku ka Madaxbannaan yahay sharciyada Yurub, kana baxay Midawga Ururka Yurub.